कृष्ण र रुपाको फेरियो जिवन, यति धेरै पैसा बोकेर आफुजस्तै पीडितलाई सहयोग गर्न बुटवल पुगे ? (भिडियो हेर्नुस्) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > कृष्ण र रुपाको फेरियो जिवन, यति धेरै पैसा बोकेर आफुजस्तै पीडितलाई सहयोग गर्न बुटवल पुगे ? (भिडियो हेर्नुस्)
admin February 1, 2020 भिडियो, समाचार, समाज	0
माघ १८, काठमाडौं । केही महिना अघि सम्म कृष्ण वली र रुपालाई सहयोग गर्न हजारौं नेपालीहरु एक भएका थिए । उनीहरुको घरमा थुप्रै नेपालीहरुको जमघट हुन्थ्यो । देशविदेशमा बस्ने नेपालीहरुले उनीहरुलाई आर्थिक सहयोग गरेका थिए । अहिले कृष्ण वली आफै हिड्न सक्ने भएका छन् । उनी आफु हिड्ने मात्र होइन अरुलाई सहयोग समेत गर्न सक्ने भएका छन् । यतिबेला कृष्ण वली र रुपा अरुलाई सहयोग गर्न बुटवल पुगेका छन् ।
वुटवलका एक युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिर थिए । कामको शिलशिलामा रहेका बेलामा उनको शरिरमा समस्या आयो । शरिर झमझमाउने भएपछि उनी उपचारका लागि नेपाल आए । नेपाल आएपछि उनले चिकित्सकलाई देखाए । चिकित्सकले उनलाई क्यान्सर भएको बताए । तर उनीहरुको आर्थिक हैसियत त्यसको उपचार गर्न सक्ने थिएन । साउदीमा रहेका उनलाई कामको शिलशिलामा उहाँ नै समस्या देखिएको थियो ।
विदेशमा रोग पत्ता नलागेपछि उनी नेपालमा आएर उपचार गर्दा क्यान्सर भएको पत्ता लागेको हो । काठमाडौं स्थित अन्नपुर्ण न्युरो अस्पतालमा उपचारार्थ उनी पैसा नभएपछि फेरी घर फर्किए । पैसा नभएकै कारण अस्पतालवाट उनी घर फर्केका थिए । उनको दुईवटा खुट्टा चल्दैनन् । श्रीमती २० वर्षकी छन् । उनीहरुको एउटा सन्तान छ । श्रीमानको यस्तो अवस्था भएपछि उनको श्रीमतीको आँखा ओभाएका छैनन् ।
परिवारकाे खुशीका लागि कुवेत पुगेका एक नेपालीकाे सडक काट्ने क्रममा यसरी गयो ज्यान
हास्य कलाकार माग्ने बुढाले आफु राष्ट्रपतिबाट सम्मानित भएपछि लेखे यस्तो सबैको मनछुने स्टाटस